अहिलेका नर्समा संवेदनशीलताको कमी देख्छु – Health Post Nepal
अहिलेका नर्समा संवेदनशीलताको कमी देख्छु
२०७५ पुष १८ गते १६:३५
नर्सिङ पेसा कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो ?
नर्सिङको कुरा गर्दा मैले वि.सं. २०३८ मा अध्ययन सुरु गरेँ । ०४१ मा अध्ययन पूरा गरेलगत्तै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा स्टाफनर्सका रूपमा काम सुरु गरेँ । अनमी खारेज भएर स्टाफनर्सको अध्ययन सुरु हुनेक्रममा विराटनगरबाट नर्सिङ विषय अध्ययन गर्ने पहिलो ब्याज हो मेरो ।
वीर अस्पतालमा काम गरेको भने झन्डै ५ वर्ष भयो । त्यअघि म त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नर्सिङ अफिसरका रूपमा काम गर्थें । लोकसेवा वीर आएपश्चात् करिब १७ महिना मैले यसअघि पनि वीर अस्पतालमा काम गरेकी थिएँ । वीरमा नर्सिङ निर्देशकका रूपमा गरेको चाहिँ आगामी फागुनमा ५ वर्ष पुग्छ ।
नेपालका राम्रा नर्सिङ कलेजमा १० हप्ता पढेपश्चात् विद्यार्थीलाई ल्याबमा लगेर प्रयोगात्मक अभ्यास गराउने गरिन्छ । त्यसपश्चात् अस्पताल वा क्लिनिकलमा अभ्यास गराइन्छ । विदेशमा पढेर आएकाको कुरा गर्नुपर्दा उनीहरूले बिरामीसँग काम गर्र्नै पाउँदारहेनछन् । बिरामीसँग सिक्नै नपाएपछि वास्तविक ज्ञान त उसले हासिल नै गर्न पाएको हुँदैन । त्यसकारण उनीहरूमा सीप तथा दक्षता एकदमै कम हुने गर्छ । त्यस्तो जनशक्तिलाई काममा लगाएर बिरामी तलमाथि हुँदा त्यसको जिम्मेवार को बन्ने ? मलाई छनोट प्रक्रियामा राखिन्छ भने बाहिरबाट नर्सिङ पढेर आएकालाई म छनोट नै गर्दिनँ ।
नेपाली नर्सिङ क्षेत्रमा के–कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ?
नेपालमा नर्सिङ क्षेत्रका चुनौतीको कुरा गर्नुपर्दा पहिले त नर्सिङ उत्पादनकै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा स्टाफनर्स पढाउने कलेज मात्रै १ सय १७ वटा छन् । कतिपय कलेजबाट उत्पादित दक्ष मानिने नर्सिङ जनशक्तिको गुणस्तर नै राम्रो छैन । त्यसमा गुणस्तर कायम गराउनमा हाम्रो चुनौती छ । बाहिरबाट पढेर नेपाल आएका समेत गरी वार्षिक करिब ७–८ हजार नर्स उत्पादन हुने गर्छन् । जसमा बिएसी नर्सिङ, अनमीलगायत सम्पूर्ण समावेश छन् । यसरी उत्पादित जनशक्तिमा सही रूपमा सीप र ज्ञान हासिल हुन सकेको छैन । नेपालमा भन्दा पनि भारतमा पढेर आएकाहरूको सीपपक्ष ज्यादै कमजोर छ । उनीहरूसँग ज्ञान नभएको होइन, तर प्रयोगात्मक अभ्यास भने ज्यादै न्यून छ ।
प्रयोगात्मक ज्ञान नपाएकै कारण उनीहरू ‘अन द जब ट्रेनिङ’का लागि पैसा तिरेर पनि आउने गर्छन् । वीर अस्पतालमा त्यस्तो टे«ेनिङका लागि आउनेहरूलाई हामीले हाम्रो स्टाफको निगरानीमा राखेर सिकाउने गरेका छौँ । तर, सबैले भने यस्तो अवसर पाउँदैनन् । जनतालाई कसरी गुणस्तरीय सेवा दिने भन्ने विषय नै नेपाली नर्सिङ क्षेत्रको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
गुणस्तर कायम गर्न नसक्नुका कारण के–के होलान् ?
यसका धेरै छन् । त्यसमध्ये बाहिर अध्ययन गरेर आउनेहरूको सीपमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
सरकारी नीतिमा सय बेडमा सञ्चालित अस्पतालका लागि नर्सिङ अध्यापन अनुमति दिने प्रावधान छ । नीति बन्नुअघि अर्काे अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि लैजान पाउने व्यवस्था पनि थियो, जसलाई नेपाल सरकारले अहिलेसम्म पनि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
विद्यार्थीको प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि जुन अस्पताल तोकिएको हुन्छ, त्यहाँ बिरामी नै हुँदैनन् । बिरामी नै नभएको ठाउँमा विद्यार्थीले कसरी प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने ? कतिपय सय बेडका अस्पतालमा ६–७ जना मात्रै बिरामी भएको पनि हामीले देखेका छौँ । त्यसैले सीप आर्जनमै समस्या छ ।
वीर अस्पतालले भने आफ्नै देशमा उत्पादित नर्सिङ जनशक्ति हुन् भनी पालो मिलाएर उनीहरूलाई सिकाउने गरेको छ । वीरमा पनि १० वटासम्म कलेजका विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आउने गरेका छन् ।
सरकारले आवश्यक नर्ससंख्या, नर्स र जनसंख्या तथा बिरामी अनुपातलगायत विषयमा योजना नै बनाउने गरेको छैन ।
नर्सिङमा उत्पादनअनुसार खपत हुन नसकी बेरोजगारी व्याप्त हुनुको कारण के होला ?
उत्पादनअनुसार नर्सिङ जनशक्ति खपत नहुनुको पहिलो कारण भनेको नर्स तथा बिरामीको अनुपात नमिल्नु नै हो । वीरमा अहिलेको अवस्थामा अनुमानित करिब ६ सय नर्सिङ स्टाफको आवश्यकता छ । त्यसमा हाल २ सय ७० जना मात्र कार्यरत छन् । एकजना नर्सले ४ देखि ६ बिरामी हेर्नुपर्ने सरकारी मापदण्ड छ । तर, व्यवहारमा १ नर्सले २५ जनासम्म बिरामी पनि हेर्नुपर्ने बाध्यता हामीकहाँ छ ।
अर्को कारण, योजनाबद्ध रूपमा उत्पादन नहुनुले पनि उत्पादन र खपतको अनुपात नमिलेको हो । नर्सिङ पढाउने कलेजहरू गरिखाने भाँडोजस्ता भएका छन् । सरकारले आवश्यक नर्ससंख्या, नर्स र जनसंख्या तथा बिरामी अनुपातलगायत विषयमा योजना नै बनाउने गरेको छैन ।
अर्को कुरा, थोरै पूर्वाधार पुर्याउन खोज्दैमा कलेज सञ्चालनको अनुमति दिनुले पनि जथाभावी रूपमा उत्पादित नर्सिङ जनशक्ति खपत हुन नसकेको हो ।
कलेजको सम्बन्धन दिने कुरामा पहिले र अहिलेको मापदण्ड फरक छ । पहिले ५० बेडको अस्पताललाईसमेत ४० जनासम्म पढाउन अनुमति दिइएको थियो । तर, अहिले सय बेडमा मात्रै ४० जना पढाउने भन्ने मापदण्ड छ । सरकारले पहिलेका कलेजको कोटा घटाएर २० मा ल्याउन सकेको छैन र उनीहरूलाई रोक्न पनि सकेको छैन । नयाँ नियम लागू हुँदा मापदण्ड नै पूरा नभएजस्तो देखिएको छ ।
अहिले भने नयाँ कलेजलाई सम्बन्धनको प्रक्रियाले खासै गति लिएको छैन । म कतिपय अस्पतालको अवलोकनमा जाँदा त्यहाँ बिरामीसंख्या नै नपुग्नुचाहिँ प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ ।
बेरोजगारी बढ्नुको मुख्य कारण भनेको उत्पादनअनुसार नर्सिङ जनशक्ति खपत हुन नसक्नु नै हो । त्यसको समाधानका लागि उत्पादनमै कमी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले आगामी दिनमा कलेज सम्बन्धनको अनुमति दिँदा आफ्नै अस्पताल भएकालाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।
गुणस्तर तथा मापदण्ड नपुग्ने कलेजहरू भने क्रमशः बन्द हुँदै जान्छन् । मापदण्ड र गुणस्तर पुर्याउन नसकेको खण्डमा पहिले नै सम्बन्धन दिएका कलेजहरूको सिट घट्न सक्ने सम्भावना छ ।
पहिले र अहिलेको नर्सिङ पेसा र जनशक्तिमा के फरक पाउनुहुन्छ ?
प्रविधिको क्षेत्रमा भएको परिवर्तनका कारण पहिलेभन्दा अहिले नर्सलाई काम गर्न सजिलो र गाह्रो दुवै छ । एकातिर धेरै समय लाग्ने काम प्रविधिको प्रयोगले छिटो र सस्तोमा पूरा गर्न सकिने बनाइदिएको छ भने अर्काेतिर नयाँ प्रविधिसँगको अपर्याप्त ज्ञानका कारण त्यसले काममा केही असहज स्थिति पनि बनाएको छ ।
मैलै अर्काे भन्नैपर्ने कुरा भनेको अहिलेका नर्समा अलिकति संवेदनशीलताको अभाव भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । मेरो आफ्नै बच्चाको कुरा गर्नुपर्दा पनि त्यो उमेरमा हामीमा भएको संवेदनशीलतासित तुलना गर्ने हो भने अहिलेका बच्चामा संवेदनशीलताको कमी छ ।
नर्सिङ अध्ययनरत रहँदा पनि हाम्रो समयको अनुशासन छुट्टै प्रकारको थियो । त्यतिवेलाको नर्सिङ वास्तवमै केयरिङ थियो । अहिलेचाहिँ केयरिङमा ह्रास हुन लागेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।
आगामी दिनमा नर्सलाई भोलेन्टेयरका रूपमा राख्न पाइँदैन भन्ने पनि छ नि ?
भोलेन्टेयरका रूपमा कार्यरत नर्सहरूले नर्सिङ संघमा निजी अस्पतालले श्रमशोषण गरेको जनाउँदै निवेदन दिएका थिए । त्यसमा नर्सिङ संघले आगामी दिनमा नर्सलाई भोलेन्टेयरका रूपमा राख्न पाइँदैन भनी पहल गरेको थियो ।
एउटा नर्सको कहिल्यै बिरामीसँग गुनासो हुँदैन । गुनासो हुने भनेको बिरामीको नातेदार तथा आफन्तसँग मात्रै हो । उहाँहरूबाट भन्नासाथ नर्सहरू बिरामीको केयरमा पुगेनन् भन्ने गुनासो धेरै आउने गरेको छ । एकजना नर्सले २५ जनासम्म बिरामीको केयर गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो कसरी सम्भव हुन सक्छ ?
तर, वीरमा भोलेन्टेयरका रूपमा राखिदिनुपर्यो भन्दै धेरै पिसिएल नर्सिङ गरेकाहरू आउने गर्छन् । एक वर्ष काम नगरी बिएन गर्न नपाइने नियम भएकाले यसरी भोलेन्टेयरका लागि अनुरोध गर्न आउने गरेका हुन् । भोलेन्टेयरका रूपमा काम नगरेमा उनीहरूले सिक्ने कहाँबाट ? निश्चित समूहको विरोधका कारण नै वीरमा एकजना पनि नर्स भोलेन्टेयरका रूपमा कार्यरत छैन । वीरमा भोलेन्टेयर नर्स नराखेको करिब ४ वर्ष भइसक्यो ।
नर्स र बिरामीबीचको सम्बन्ध कस्तो छ र हुनुपर्छ ?
नर्स र बिरामीबीचको सम्बन्धको कुरा गर्दा प्रायः राम्रै देखिन्छ । तर, बिरामीका आफन्त तथा नातेदारसँग भने यदाकदा झर्काेफर्काे हुने गर्छ ।
मैले पनि स्टाफनर्सका रूपमा १० वर्ष काम गरेँ । एउटा नर्सको कहिल्यै बिरामीसँग गुनासो हुँदैन । गुनासो हुने भनेको बिरामीको नातेदार तथा आफन्तसँग मात्रै हो । उहाँहरूबाट भन्नासाथ नर्सहरू बिरामीको केयरमा पुगेनन् भन्ने गुनासो धेरै आउने गरेको छ । एकजना नर्सले २५ जनासम्म बिरामीको केयर गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो कसरी सम्भव हुन सक्छ ? बिरामीसँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर नै हामीले बिरामीको केयर गरिराखेका हुन्छौँ ।
नर्सिङ बेरोजगारी तथा बिदेसिनेक्रम न्यूनीकरणका लागि सरकारले के–कस्ता काम गर्नुपर्ला ?
पहिलो कुरा त नेपाल सरकारले नर्सिङ जनशक्ति आवश्यक रहेका सम्पूर्ण संस्थामा दरबन्दी राख्नुपर्ने हुन्छ । अहिले विद्यालय नर्सको अवधारणा पनि ल्याइएको छ, त्यसलाई लागू गर्न सकेको खण्डमा पनि नर्सिङ बेरोजगारी केही मात्रामा कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, कलकारखानामा पनि नर्सिङ केयरको आवश्यकता हुने गर्छ ।
नर्सिङ केयर चाहिने सम्पूर्ण ठाउँहरूमा नर्स राख्ने हो भने नर्सिङ बेरोजगारी तथा नर्स पलायनको स्थितिलाई रोक्न सकिन्छ । यसका साथै पढाइको गुणस्तर कायम गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।
गोमादेवी निरौला श्रेष्ठ
कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्नेलाई जेल हाले हुन्छ : डा. जागेश्वर गौतम